Taratasy vaovaon'ny UNWTO ho an'ireo firenena mpikambana ao aminy: fanitsakitsahana ny fenitry ny fitondrantena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Taratasy vaovaon'ny UNWTO ho an'ireo firenena mpikambana ao aminy: fanitsakitsahana ny fenitry ny fitondrantena
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili vao avy nihaona tamin'ny masoivohon'i Mozambika any Madrid
Ho valin'ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitry ny etika UNWTO sy ny taratasy misokatra avy amin'ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha ao amin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili dia nandefa taratasy haingana tany amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO. Nanomana fanampim-panazavana ihany koa izy mba hanazavana ny tatitry ny HR momba ny fanakianana ny tompon'andraikitra momba ny etika UNWTO.
Toa fiezahana mafy hanavotra ny toerany izany, sady manao fiampangana tsy marina amin’ireo tompon’andraikitra ambony ao amin’ny UNWTO teo aloha.
Ny filana famoizam-po dia mitarika amin'ny asa mamoy fo ho an'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili
Sambany ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili naneho hevitra na namaly an eTurboNews lahatsoratra.
Tsy tany amin’ny tonian-dahatsoratra anefa ny valin-teniny, fa tany amin’ireo firenena mpikambana ao amin’ny UNWTO rehetra. Ny taratasiny misy an Nalefa tamin'ny zoma ny fanampim-panazavana, andro vitsy talohan'ny latsa-bato miafina mampiady hevitra natao hanesorana an'i Pololikashvili indray ho sekretera jeneralin'ny UNWTO. Ny 3 desambra ho avy izao ny latsa-bato mandritra ny fivoriamben'ny UNWTO any Madrid.
Ny sekretera jeneraly dia "niezaka nanazava" ny fanakianana nataon'ny tompon'andraikitra momba ny etika UNWTO tao amin'ny tatitra tany amin'ny fivoriamben'ny UNWTO sy ny taratasy misokatra nalefan'ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha ao amin'ny UNWTO momba ny tatitra momba ny kolontsaina sy ny fomba fitantanana ao amin'ny UNWTO. UNWTO.
Narahin'ny hetsika nataon'i Costa Rica nangataka latsa-bato miafina ho amin'ny fihainoana ny fanamafisana ny UNWTO ho avy ny fanendrena ny sekretera jeneraly.
Zurab Pololikashvili dia mahatsapa mazava tsara fa voarahona ny tsy hahazoany ny fe-potoam-piasana faharoa amin'ny maha-Sekretera jeneralin'ny UNWTO azy.
Tantara farany sy fanovozan-kevitra:
Nahoana no tsy voafidy araka ny tokony ho izy ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Polokashvili…
Minisitry ny fizahantany any Costa Rica dia dingana goavana ho an'ny UNWTO vaovao…
Nahoana ny fifidianana UNWTO no tokony ho lasa ahiahy maika…
Taratasy misokatra faharoa nataon'ireo tompon'andraikitra ambony UNWTO mandrisika…
22 ENY, 250 TSIA: Zurab Pololikashvili ho an'ny UNWTO…
Ny masoivoho any Madrid dia nanasa ny UNWTO tsolotra…
Ny hoavin'ny UNWTO novolavolain'i Arabia Saodita sy Espaina: Vaovao…
Fivoriambe UNWTO any Madrid izao: Zurab…
UNWTO nifindra tany Arabia Saodita: Sekretera jeneraly…
Rehefa niresaka izany ny Printsy Saodiana sy ny PM Espaniola…
Ny fankahalan'ny UNWTO an'i WTTC dia misy fitiavana voasioka…
Ao amin'ny taratasiny, Pololikashvili dia manoratra fa teo ambany fitondran'ireo solontenan'ny UNWTO teo aloha dia nisy ny tsy fanarahan-dalàna.
Na izany aza, tsy nisy tsy fanarahan-dalàna hita tao amin'ny tatitra fanao isan-taona nomanin'ny mpanamarin-kaonty avy amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO.
Ny fitantarany tao amin'ny taratasy vao haingana ho an'ireo firenena mpikambana dia fiampangana diso tamin'ny mpitantana sy ny mpiasa teo aloha, ary tandindon'ny fomba niampangan'i Zurab ny mpitantana sy ny mpiasa teo aloha hatramin'ny fotoana nitondrany azy.
Niteraka rivo-piainana tena ratsy tao amin'ny fikambanana izany ary nanomboka kolontsaina fanorisorenana sy fampitahorana ireo mpiasa tsara (teo aloha) maro.
Fametrahana ny kolikoly sy ny fanodikodinana
Hatramin'ny Zurab Nandray ny toerany i Pololikashvili, nanao andrana imbetsaka ny UNWTO hanohanana ny kolikoly sy ny fanodinkodinana, ka mody arahana tsara ny fomba fiasa anatiny rehetra, ohatra amin'ny fandraisana mpiasa sy ny fividianana entana. Na izany aza, raha ny tena izy, Pololikashvili dia nanao izay hahazoana antoka fa ny komity fandraisana mpiasa sy ny fividianana entana ao amin'ny UNWTO dia tsy misy afa-tsy ireo namany akaiky, izay handray izay fanapahan-kevitra tiany.
Ny fametrahana toerana manara-maso anatiny amin'ny alalan'ny fanendrena tompon'andraikitra etika anatiny dia natao mazava tsara mba hifehezana bebe kokoa ny fitarainana ataon'ny mpiasa.
Natao ihany koa izany mba hampitahorana ireo mpiasa izay te hitatitra olana.
Teo ambanin'ny fitantanana teo aloha dia nisy tompon'andraikitra etika ivelany izay nanana toerana tsy miandany sy mahaleo tena.
Nandritra ny volana voalohany teo amin'ny fitondrana, Pololikashvili dia nanova ny dingana ho toerana etika anatiny.
Tsapany fa amin’ny alalan’ny tompon’andraikitry ny etika anatiny dia ho mora kokoa ny mampihatra ny fanerena hanaisotra ny fitarainana rehefa ilaina izany.
Norahonan'ny tatitry ny tompon'andraikitra etika sy ny taratasy misokatra avy amin'ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha ao amin'ny UNWTO Pololikashvili dia nandefa taratasy haingana tany amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO ary nanomana fanampim-panazavana amin'ny tatitry ny HR momba ny fanakianana nataon'ny UNWTO Ethics Officer.
Tao anatin'ny fiezahana mafy hanavotra ny toerany, dia nampiany fiampangana diso ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha ao amin'ny UNWTO.
Ny taratasin'ny sekretera jeneraly sy ny fanampim-panazavana dia voarain'ny minisitry ny fizahantany any amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO.
Alohan'ny hamoahana ny taratasy, eTurboNews nahazo fanehoan-kevitra avy amin'ireo minisitra sy tompon'andraikitra ambony eo amin'ny sehatry ny fizahantany, maneho ny ahiahiny sy ny henatra amin'ny fihetsik'i Pololikashvili.
Mahamenatra ny niampangan'i Pololikashvili ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha ao amin'ny UNWTO, anisan'izany ny sekretera jeneraly roa teo aloha ho mandika ny fenitry ny fitondran-tena ho an'ny mpiasam-panjakana iraisam-pirenena rehefa mametraka ahiahy lehibe momba ny kolontsaina sy ny fomba fitantanana ao anatin'ny UNWTO izy ireo.
Heveriny ve fa tsy azo atao ny manakiana ao amin'ny ONU?
Araka ny fahitan'i Polokashvili, ny tsy fivadihana dia toa mitovy amin'ny fanafoanana ny fanakianana. Io toe-tsaina io sy io fomba fitantanana mampatahotra io indrindra no mifanohitra amin'izay soatoavin'ny Firenena Mikambana.
Zurab Nanomana ity taratasy ity sy fanampim-panazavana amin'ny tatitry ny HR i Pololikashvili, kanefa feno fampahalalana momba ny toe-bola tao anatin'ny folo taona lasa ny addendum.
Tsy nampisalasala ny ahiahin'ny tompon'andraikitra etika izany. Raha ny marina, io karazana valinteny io dia mampiseho mazava ny antony nanaovan'ilay tompon'andraikitra momba ny etika ny fanakianana azy ary nanapa-kevitra ny handefa ny taratasiny misokatra ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha.
Pololikashvili dia mandray crédit amin'ny famadihana ny balan'ny UNWTO avy amin'ny ratsy ho tsara. Na izany aza, navelany ny zava-misy fa i Arabia Saodita dia nandoa UNWTO 5 Million Dollars tamin'ny fananganana foibe UNWTO isam-paritra ao Riyadh. Io 5 tapitrisa dolara io dia miampy ny lafo sy ny fampandehanana ny foibe.
Ny zava-misy fa ny tompon'andraikitra amin'ny etika dia ahitana teny mampatahotra sy mitsikera toy izany ao amin'ny tatitra ho an'ny fivoriambe ary maro ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha UNWTO no nandray an-tanana sy nanoratra taratasy misokatra natao ho an'ireo firenena mpikambana dia mampiseho mazava fa misy zavatra tsy mety ao anatin'izany. UNWTO.
Tsy mitombina ny fanambaran'i Pololikashvili fa misy fiantraikany amin'ny firaisankina sy ny firaisankinan'ny UNWTO ireo tompon'andraikitra teo aloha UNWTO. Noho ny fahafantarany fa ny tenany hatramin’ny nandraisany fahefana no tompon’andraikitra amin’ny firaisankina sy ny firaisan-kinan’ny Fikambanana izay ho ravan’ny disadisa sy fifanolanana maro natombony.
Mila deraina ny tompon'andraikitry ny etika sy ireo tompon'andraikitra teo aloha ao amin'ny UNWTO tamin'ny nanaovany ny hetsika nampibaribary an'i Zurab.
Tsy azonao an-tsaina mazava izay fanazavana ezahiny omena ao amin'ny taratasiny farany ho an'ireo firenena mpikambana.
Tsy misy afa-tsy tabataba, fiampangana diso, ary fitabatabana sasany, fanehoan-kevitra tsy mendrika ho an'ny Sekretera jeneralin'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana.
Ny fitsabahan'ny UNWTO amin'ny fizotry ny fifidianana ho avy
Raha mbola mitohy ny fisalasalana momba ny fanamafisana ny fe-potoam-piasana faharoa an'i Pololikashvili ho Sekretera jeneralin'ny UNWTO, eTurboNews Nahafantatra fa misy manampahefana ao amin'ny UNWTO miara-miasa amin'i Pololikashvili mba hifandray amin'ireo firenena mpikambana. Miezaka manindry ireo solontena izy ireo na manao fifanarahana mba hahazoana vato ho an'ny fanendrena indray an'i Pololikashvili.
Raha toa ka misy zavatra mifanohitra amin’ny fitsipi-pitondran-tena ho an’ny mpiasam-panjakana iraisam-pirenena dia io fitsabahana amin’ny lalam-pifidianana eo anivon’ny Firenena Mikambana io. Ny mpiasan'ny UNWTO dia mila mijanona tsy miangatra amin'ny fotoana rehetra, indrindra amin'ny fifidianana.
Nambara ihany koa ny ahiahy fa miezaka mafy hanamora ny fifanarahana i Pololikashvili fa ny firenena mpikambana izay tsy afaka mandefa solontena any amin'ny Fihaonambe any Madrid dia hamela ireo mpikambana hafa akaiky an'i Pololikashvili hifidy amin'ny anaran'izy ireo.
Ny tapa-bolana ho avy dia ho zava-dehibe ho an'ny hoavin'ny UNWTO ary ny tari-dalana tena ilain'ity fikambanana ity dia tokony homen'ity fikambanana ity amin'ny dingana fanarenana ny fizahan-tany manerantany.
Tena ilaina ny mijanona ho mailo sy mahazo vaovao feno momba ny fanapahan-kevitra horaisina sy ny fizotran'ny fifidianana amin'ny fivoriambe ho avy. Izany no hany fomba azo antoka fa ny Fihaonambe no hanomboka ny dingana hananganana UNWTO matanjaka kokoa.
Izany dia ho tombontsoan'ny firenena mpikambana rehetra ao amin'ny UNWTO sy ireo fikambanana maro, mpandraharaha ary mpiasa miasa miaraka amin'ny UNWTO eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy fizahantany.
Ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO dia tokony hiasa mitovy amin'ny firenena mpikambana rehetra, fa tsy izay ianteheran'ny sekretera jeneraly ihany no hofidiana indray.
Fanehoan-kevitry ny minisitra:
Ny tsy fahaiza-manao sy ny tsy fahampian'ny fiarovana ny kalitao amin'ny anaran'ny indostria amin'ny fotoana sarotra indrindra amin'ny tantarantsika. Zurab dia mpamaly faty sy tsy manaja olona sy fikambanana izay heveriny fa tsy manohana ny politikany sy ny fandaharany amin'ny dingana mampisaraka ireo mpiara-miombon'antoka efa hatry ny ela ka mampalemy ny UNWTO. Mandalo tsy miteny izy ary malaina mihitsy! Mendrika tsara kokoa ny UNWTO!!
Ny taratasiny dia manamafy ny fahitany ny fikambanana mihidy tsy azo fehezina any ivelany. Nampoizina fa tokony hanao izany izy.
Tsy misy resaka mihitsy ao anatin’ny taratasiny momba ny tatitry ny tompon’andraikitra etika izay tena resahin’ny taratasy misokatra sy antontan-taratasy ho an’ny daholobe. Tsy misy fanamarinana ny antony nitazonany ny datin'ny filankevi-pitantanana tamin'ny volana Janoary rehefa nafindra ny FITUR tamin'ny Janoary ho Mey.
Fantany tsara ny haavon'ny fanodinkodinana natao hametrahana azy ho fanamafisana azy.
Ny taratasiny dia fandrahonana ho an'ireo mpitsikera sy firenena mpikambana hafa izay te-hihantsy azy.
Loza sy tsy fahombiazana izy!
Mampiasa io sehatra io izy hanomanana ny tenany ho praiminisitra ao amin'ny fireneny, Georgia.
Nahoana izy no nanendry CFO avy any Georgia, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny raharaha ara-bola ao amin'ny UNWTO amin'ny fitondrana olona avy any amin'ny fireneny?
Mandeha any amin'ny faritra kely izy mba hanome azy ireo mari-pankasitrahana na hanao kolikoly mba hahafahan'izy ireo mifidy azy.
Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy esorina izy raha tsy izany dia hahazo fifanarahana manta ho an'ny faritra misy azy ny ankamaroan'ny firenena mpikambana.
Mety hisy ny fisintonana faobe ireo mpikambana matotra. Ny UNWTO dia mety ho lasa sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana hafa tsy mahomby sy tsy misy ilana azy, raha voamarina sy mitohy izy.
Ny taratasin'i Zurab Pololikashvili resahina ato amin'ity lahatsoratra ity:
Madrid, 19 Novambra 2021
Manantena aho fa hahita anao tsara ny fifaneraserako. Voninahitra ho ahy ny hiresaka aminareo mba hampahafantatra anareo fa malahelo mafy aho amin'ny fifandraisana vao haingana nataon'ireo mpiasan'ny UNWTO teo aloha navoaka tamin'ny haino aman-jery sasany. Amin'ny fotoana izay iarahan'ny sehatry ny fizahantany manontolo amin'ny voka-dratsin'ny valan'aretina ary ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany dia miantso ny firaisankina sy ny firaisankina, ny asany dia voasakantsakan'ny andiana fiampangana tsy mitombina nataon'ny mpiasa ambony UNWTO teo aloha.
Indrisy anefa, ireo famoahana natao tamin'ny alalan'ny taratasy ho an'ny daholobe sy tao amin'ny youtube.com ireo dia manimba ny mangarahara sy ny fahamendrehan'ny Fikambanana, izay miasa mafy amin'ny fanomanana ny fivoriambe ho avy any Madrid. Misy fiantraikany amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO izay te-hahita ny Fikambanana matanjaka sy miray hina ihany koa izy ireo, ary mametraka fanontaniana amin'ny maha-ara-dalàna ny fanapahan-kevitry ny Filan-kevi-pitantanana. Izany no mahatonga ahy tsy afaka hangina intsony ary mahatsiaro ho voatery hamaly.
Fanitsakitsahana ny fenitry ny fitondran-tena iraisam-pirenena
Ny fiampangana nataon'ireo mpiasan'ny UNWTO teo aloha dia mahakivy sy mampahatahotra, indrindra indrindra, amin'ny fiheverana fa, rehefa nanompo tao amin'ny Fikambanana nandritra ny taona maro, izy ireo, tsara kokoa noho ny rehetra, dia tokony hiaro sy hiaro ny endriny sy ny fahamarinany. Tamin'ny fametrahana ara-dalàna ny fifandraisana ara-barotra amin'ny UNWTO, ny mpiasa rehetra, anisan'izany ny tenako, dia nanome toky fa tsy hitsabaka amin'ny raharahan'ny Fikambanana sy ny an'ny Filan-kevi-pitantanana mandritra ny fotoana iasany sy aorian'ny fiafaran'ny fifandraisana amin'ny asa. Indrisy anefa fa tamin'ny fananganana ny Fihaonambentsika dia tapaka io fampanantenana io, tsy indray mandeha ihany, fa imbetsaka. Malahelo aho fa ny fanafihana toy izany dia tsy inona fa fiezahana maharitra hanodikodinana sy hanakanana ny fizotran'ny fanapahan-kevitry ny Fikambanana, araka ny voalazan'ny Lalàny. Vao mainka mampikorontan-tsaina ihany koa raha nandritra ny fitondran'ireo solontenan'ny UNWTO teo aloha, nanao sonia taratasy misokatra, nisy ny tsy fanarahan-dalàna ary maro ireo firenena mpikambana manan-danja nisintona, toe-javatra izay efa ezahan'ny Fikambanana sitranina hatramin'izay.
Ny tsy firaharahiana ny fiandrianam-pirenen’ny Filan-kevi-pitantanana
Ny zotram-pifidianana sy ny tetiandrom-pifidianana amin’ny fanendrena ataon’ny Filankevitra mpanatanteraka ny kandidà iray hatolotra ny Fihaonambe dia ao anatin’ny fehin-kevitry ny Filankevitra mpanatanteraka ihany. Narahina sy nankatoavin’ny Sekretariam-panjakana an-tsakany sy an-davany izany fomba fiasa izany, nolanian’ny Filankevitra mpanatanteraka tamin’ny fotoam-pivoriana faha-112, sy ny daty sy ny toerana hanaovana ny fivoriana faha-113, ka anisan’izany ny fandraisana, ny fanokafana ary ny fijerena ny fangatahana, ny fombafomba natao. iaraha-miasa akaiky amin’ny solontenan’ny Filohan’ny Filankevitra mpanatanteraka andiany faha-113.
Mamo amin'ny alalan'ny haino aman-jery
Ankoatr'izay, UNWTO dia manana firaketana momba ny hetsika ara-dalàna natomboka tamin'ny haino aman-jery voafidy noho ny fampiasana tsy ara-dalàna sy tsy nahazoana alalana ny famantarana UNWTO (2017), ny fandraketana tsy nahazoana alalana ary ny famoahana ny fotoam-pivorian'ny UNWTO Governing Bodies (2017-2018); ary fanalam-baraka ny mpiasan'ny Fikambanana izay tsy mitana andraikitra ara-panjakana (2019).
Amin'ity dingana ity dia adidiko ny mitahiry ny sasany amin'ireo fampahalalana eo ambanin'ny tombontsoa ara-dalàna, mba hialana amin'ny fanohintohinana ny fizotry ny fizotry ny taona 2018 amin'ny sasany amin'ireo nanao sonia ny taratasy ary hiarovana ny lazan'ny Fikambanana. Ireo dingana ireo dia natomboka taorian'ny fanaraha-maso voalohany nataon'ny orinasa ivelany iray, KPMG, noho ny fangatahako tamin'ny fandraisako ny birao, mba hamantarana ny mety ho fanafodiny amin'ny tsy fahampiana ara-bola goavana ao amin'ny Fikambanana, izay nanimba ny serivisy UNWTO ho an'ireo mpikambana ao aminy sy ny fanatanterahana izany. ny mandat azy.
Fifandraisana amin'ny UNWTO
Mampanahy manokana ny fanapahan-kevitry ny firenena mpikambana sasany hifampiresaka amin'ny fomba tokana amin'ny alalan'ny haino aman-jery iray. UNWTO no fikambanana misy anao, izay manompo ny Mpikambana ao aminy, ary misokatra hatrany amin'ny fanazavana rehetra ambaran'ny Firenena Mpikambana ao aminy amin'ny endrika mifanaraka amin'izany, araka ny voalaza ao amin'ny fifaneken'ny UNWTO. Ny tsy fivadihan'ny rehetra sy ny dingana fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny Filan-kevi-pitantanana no ampirisihiko hohajaina. Araka ny voalazan'ny sata mifehy ny Fikambanana, izay nirahan'ny Firenena Mpikambana rehetra, dia ireo no sehatra mety hiadian-kevitra sy hifanakalozan-kevitra momba ny fandaminana ataon'ny mpikambana rehetra ao amin'ny Fikambanana. Fitsipika tena ilaina izany mba hiantohana ny fampandehanana tsara ny taova sy ny dingan'ny fandraisana fanapahan-kevitra ary koa ny tombontsoa sy ny endriky ny andrim-panjakana.
Mikasika ireo fiampangana tsy marim-pototra, tiako ny misarika ny sainao ho amin'ny fanazavana nomen'ny Sekretariat ao amin'ny fanampim-panazavana amin'ny antontan-taratasy A/24/5(c) natolotry ny Fihaonambe. Ho hitanao ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny ezaka tsy mbola nisy toy izany nanomboka tamin'ny taona 2018 mba hanamafisana tsikelikely ny mangarahara sy ny tamberin'andraikitra amin'ny Fikambanana ary hananganana asa fanaraha-maso anatiny izay tsy nahitana ny fanohanan'ny Fitantanana teo aloha talohan'ny taona 2018.
Ry firenena mpikambana malala, ekeo ny toky amin'ny fiheverana ambony indrindra.
Fanitsiana UNWTO NARETY AO AMIN'NY ADDRESS HO AN'NY FANDRIAMANITRA